Manomboka ny asa famefena ny fanariam-pako ao Andralanitra. Niasa tao efa hatramin'ny volana janoary ny orinasa Colas ary manano sarotra ny fandrindrana ny zava-drehetra noho ireo mpitsimpona fako manembatsembana ny fifamezivezen'ireo fiara vaventy.
« Raha tsy misy sakana avy amin'ny mponina manodidina sy ny toetry ny andro, 11 volana ihany dia vita ny asa famefena. Asiana tamboho mirefy 1,7 km miaro ny toerana migodana amin'ny velaran-tany 19 hektara. Hatsaraina ihany koa ny lalana handehanan'ny fiara mpitatitra fako sy ny fandehanan'ny rano any ivelan'ny tamboho », hoy Hobby, mitantana ny fanamboarana ao Andralanitra. Ankoatra ny famefena, hojerena manokana ireo tanàna telo manodidina an'Andralanitra – Ambaniala, Ampasika ary Antaninarenina – izay homena rano fisotro madio.
Hofanina momba ny fambolena sy fiompiana ary rafitra ihany koa ireo mpitsindroka fako hahazoany manana velon-tena mendrika ka hialany amin'ny asa efa mahazatra azy. Olona miisa eo amin'ny arivo eo ho eo ireo hahzo tombon-tsoa amin'ny fanofanana. Mihevitra iahny koa ny fiadidiana ny tanàn'Antananarivo Renivohitra fa hampiasaina ireo olona ireo amin'ny fanodinana ny fako. Atomboka amin'ny fanivanana sy ny fanamboarana zezi-pako voajanahary izany. Rehefa vita kosa ny fanivanana dia alefa amin'ireo orinasa mpanodina indray ireo akoara voafantina ka avdika ho entana azo ampiasaina.